Izici, izakhiwo nezinhlobo zamaminerali | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kungenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ufunde amaminerali nezici zawo. Kuningi izinhlobo zamaminerali futhi ngayinye ikhishwa ngendlela futhi inezici ezihlukile. Umuntu usebenzisa amaminerali ukusetshenziswa okuhlukile. I-amaminerali ayilutho ngaphandle kokuqina okungajwayelekile okuqukethe izinto zemvelo nefomula ethile yamakhemikhali.
Kule ndatshana sizogxila ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamaminerali akhona eMhlabeni nokuthi zenzani. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo? Lokhu okuthunyelwe kwakho 🙂
1 Izici ezichaza amaminerali
2 Ungahlukanisa kanjani amaminerali owodwa komunye
3 Izici zamaminerali
4 Izinhlobo zamaminerali
Izici ezichaza amaminerali
Into yokuqala okufanele siyibheke ngamaminerali ukuthi iyinto engenzi lutho, engaphili, okungukuthi, ayinampilo. Ukuze amaminerali abe amaminerali, kufanele kuhlangatshezwane nemibandela eminingana. Okokuqala ukuthi akukwazi ukuvela kunoma yisiphi isidalwa esiphilayo noma izinsalela eziphilayo. Lezi yizinto zemvelo ezikhiqizwa eMhlabeni. Njengoba ingokwemvelo, kufanele ikhishwe emvelweni futhi ingadalwa ngokwenziwe.
Ngokukhishwa kwamaminerali maningi amabhizinisi. Kunabantu abafaka amaminerali mbumbulu kwamanye ama-synthetics enziwe ngabodwa ukuwathengisa ngemali yabantu abakholelwa emandleni okungaqondakali amaminerali. Isibonelo esicacile yi-labradorite, quartz, njll.
Ifomula lamakhemikhali lezimbiwa kufanele lilungiswe. Yenziwe ngama-molecule nama-athomu ahlelwe ngendlela engaguquki futhi akufanele aguqulwe. Amaminerali amabili angakhiwa ngama-athomu afanayo nama-molecule kodwa anokulingana okuhlukile. Isibonelo salokhu yi-cinnabar. Le minerali ine-formula yamakhemikhali i-HgS. Lokhu kusho ukuthi ukwakheka kwayo kwakhiwa ngama-molecule e-mercury nesibabule. Ukuze i-cinnabar ibe yiminerali eyiqiniso, kufanele ikhishwe emvelweni futhi ingajwayelekile.
Ungahlukanisa kanjani amaminerali owodwa komunye
Uma ungabaza, kunezici ezingasisiza ukuhlukanisa phakathi kwezinye izinhlobo zamaminerali nezinye. Siyakhumbula ukuthi amaminerali ngamunye anezakhiwo ezenza ukuthi ihluke futhi ihluke kwezinye. Sizobona ukuthi yiziphi izici ezingasisiza ukuhlukanisa phakathi kwamaminerali ahlukene.
Okokuqala ukwazi ukuthi sikhuluma noma cha Ikristalu. Kunamaminerali angamakristalu ngokwawo futhi avela ngemvelo. Ngokusobala akuyona i-crystal efana nale esijwayele ukuyibona, kepha inesimo se-polyhedral, ubuso, ama-vertices namaphethelo. Kufanele kushiwo ukuthi amaminerali amaningi angamakristalu ngenxa yesakhiwo sawo.
Umkhuba yifomu abavame ukuba nayo. Ngokuya ngezinga lokushisa nengcindezi lapho zakhe khona, amaminerali anomkhuba ohlukile. Yindlela ejwayelekile abanayo.
Umbala kuyisici esilula ukuhlukanisa. Umvukuzi ngamunye unombala ohlukile ongasisiza sazi ukuthi yikuphi. Kukhona futhi okungenambala futhi okusobala.
Okukhanyayo Kungesinye isici esingasisiza ukuthi sazi izinhlobo zamaminerali. Ngamunye unokukhanya okuhlukile. Kukhona nge-metallic, vitreous, matte noma adamantine luster.
Ubuningi kungabonakala kulula. Ngokuya ngosayizi nobukhulu bamaminerali ngamunye, ungabazi kalula ubukhulu. Amaminerali aminyene kakhulu mancane futhi anzima.
Amaminerali anezakhiwo ezisebenzisela ukuwahlukanisa futhi akhiqize izinhlobo ezahlukahlukene zawo. Enye yezinto zayo eziyinhloko futhi ezihlukaniswa ngazo ubunzima. Kusukela kokunzima kakhulu kuya kokuthambile zihlukaniswa isikali se-Mohs.
Enye impahla ubu-ethe-ethe. Lokho wukuthi, kulula noma kunzima kangakanani ukugqashula kanye. Ubulukhuni akufanele buphanjaniswe nobulukhuni. Isibonelo, idayimane liyiminerali elukhuni kakhulu ngoba alikwazi ukuklwebheka ngaphandle kokuthi likwelinye idayimane. Kodwa-ke, kulula kakhulu ukuyiphula lapho ishaywa, ngoba intekenteke kakhulu.
Lapho kuphuka amaminerali, ingaqhekeka ngokungajwayelekile noma ikhiphe umzimba njalo. Uma kwenzeka okwesibili, kusho ukuthi banezingcezu ezilinganayo. Ukuhlaziya amaminerali ngokuphelele kumele kubhekwe zonke izici zayo nezakhiwo zayo.
Isilinganiso se-Mohs yilokhu okulandelayo, kusuka ebulukhuni obukhulu kuya kokuncane:
Ukwenza lula ukuqonda, kufanele kuthiwe ubulukhuni buqukethe ikhono lokuklwebheka. Kulokhu, i-talc ingaklwebwa yiwo wonke umuntu, kepha ayikwazi ukuklwebha noma ngubani. I-Quartz ingaklwebha lonke uhlu kusuka ku-6 phansi, kepha ingaklwebwa kuphela yitopazi, i-corundum nedayimane. IDayimane, ekubeni inzima kakhulu, ayinakuklwebwa yinoma ngubani futhi ingaklwebha wonke umuntu.
Indlela okuvela ngayo amaminerali emvelweni kuyabasiza ukuthi babone amaqembu amabili amakhulu. Ngakolunye uhlangothi, kunjalo amaminerali akha amatshe, ngakolunye uhlangothi, amaminerali ore.
Isibonelo sohlobo lokuqala lwamaminerali yi-granite. IGranite yidwala eliqukethe izinhlobo ezintathu zamaminerali: i-quartz, i-feldspars, ne-mica (bona Izinhlobo zamadwala). Ohlwini lwesibili sinensimbi eyinsimbi. Kuyinsimbi ngoba itholakala ngqo kwinsimbi. I-iron ore inokuqukethwe okuphezulu kwensimbi yemvelo nengahlanzekile, ngakho-ke ingakhishwa ngqo. Kumele kuthiwe imikhando ivame ukuba nokungcola.
Phakathi kwamaminerali akha amatshe esinawo:
Lawa yiqembu lamaminerali akha amatshe ngobuningi obukhulu. Sithola i-biotite, i-olivine, i-quartz ne-orthoose.
Awekho ama-silicates. Lawa amaminerali awanayo i-silicon futhi ayi-gypsum, i-halite ne-calcite.
Ngakolunye uhlangothi, sinamaminerali e-ore lapho akhishwa khona ngqo ngokusebenzisa into. Ukuqoqwa okukhulu kohlobo olulodwa lwe-ore yamaminerali kubizwa ngokuthi idiphozi. Ukuthola insimbi kwi-ore, ukungcola kwehlukaniswa ngokukuchoboza bese ifaka kabusha kabusha emazingeni okushisa aphezulu. Le yindlela ama-ingots adumile akhiwa ngayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungaqonda kabanzi ngezinhlobo zamaminerali.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Izinhlobo zamaminerali